Noocyada Bangiyada iyo shaqooyinkooda kala duwan | Dhaqaalaha
Maanta, gudahood waaxda bangiyada ayaa shaqeeya oo xiriiriya maalin kasta tiro aad u tiro badan kaas oo diiradda saaraya wax ka qabashada dhibaatooyinka kala duwan ee shakhsiyaadka ama shirkadaha ay lahaan karaan waqtiyada gaarka ah. Marka la eego in qof kasta ama shirkad kasta ay leedahay baahiyo kala duwan, arrinta bangiyada waa isku mid oo bangig kasta wuxuu la macaamilaa shaqooyin kala duwan wuxuuna leeyahay badeecooyin kala duwan. Aad ayey muhiim u tahay in, si aan ugu dhowaanno bangiga aan u baahan nahay, waxaan ogaannaa 100% mid kasta oo iyaga ka mid ah iyo wixii ka sarreeya, kuwaas oo ah alaabada ay bixiso.
Taa baddalkeeda, mid waliba wuxuu leeyahay xaalado kala duwan iyo shaqaale takhasus gaar ah u leh waxa noocan ah ay bixiso. In kasta oo gudaha Isbaanishka, bangiga Spain uu mas'uul ka yahay inuu arko dhammaan hay'adaha maaliyadeed iyo waxa ay ku shaqeeyaan ee kala duwan, waa dowladda siisa xeerarka iyo shuruudaha mid kasta oo ka mid ah bangiyada, iyadoo lagu saleynayo alaabooyinka ay mid kasta oo ka mid ah bangiyadan bixiyaan. Taas macnaheedu waa in bangiyada mid walba lagu xukumo xeerar kala duwan. Si aad wax yar uga ogaato adduunka bangiyada, maanta waxaan ka hadli doonnaa noocyada kala duwan ee bangiyada iyo sida ay u shaqeyso mid kasta oo iyaga ka mid ah.
1 Noocyada bangiyada ee ku saleysan lahaanshaha
1.1 Waa maxay bangiyada gaarka loo leeyahay sideese u shaqeeyaan?
2 Waa maxay bangiyada dawladdu sidee bayse u shaqeeyaan?
2.1 Waa maxay bangiyada isku dhafan sideese u shaqeeyaan?
3 Noocyada kala duwan ee bangigu waxay kuxirantahay waxqabadkooda
3.1 Bangiga soo saara ama bangiga dhexe, maxay yihiin sideese u shaqeeyaan?
3.2 Maxay yihiin bangiyada ganacsiga sideese u shaqeeyaan?
3.3 Bangiyada maalgashiga, maxay yihiin iyo sidee u shaqeeyaan?
3.4 Waa maxay bangiyada shirkaduhu sideese u shaqeeyaan?
3.5 Bangiyada macaamiisha, maxay yihiin iyo sidee u shaqeeyaan?
3.6 Bangiyada keydka, maxay yihiin sideese u shaqeeyaan?
3.7 Waa maxay bangiyada amaahda guryaha iyo sidee u shaqeeyaan?
4 Bangiyada khasnadda
4.1 Hay'adaha amaahda rasmiga ah, maxay yihiin iyo sidee u shaqeeyaan?
Noocyada bangiyada ee ku saleysan lahaanshaha
Kala soocida bangiyada, wax aad muhiim u ah ayaa ah nooca milkiilaha ay leeyihiin, tanina waxay kaa dhigeysaa hal nooc ama mid kale. Noocyada ugu waaweyn ee bangiyada lagu yaqaan waa:
Waa maxay bangiyada gaarka loo leeyahay sideese u shaqeeyaan?
Bangiyada gaarka loo leeyahay waa bangiyo ay saamilaydu isku shirkado yihiin shirkado gaar loo leeyahay ama xitaa shaqsiyaad maalgashi ballaaran leh. Bangiga noocan ah wuxuu caan noqday dhowr sano ka hor mid ka mid ah tusaalayaasha ugu fiicanna waa bangiga caanka ah ee ING direct bank.
Waa maxay bangiyada dawladdu sidee bayse u shaqeeyaan?
Marka laga hadlayo bangiyada dowliga ah, bangiga noocan ah gebi ahaanba waxaa iska leh gobolka. Bangiyadan ayaa ah kuwa ugu caansan inta badanna halkaas ayey ku sugnaayeen inta uu nool yahay. Tusaalaha wanaagsan ee noocan ah bangiga waa bangiga Spain ama bangiga dhexe ee Yurub.
Waa maxay bangiyada isku dhafan sideese u shaqeeyaan?
Bangiyada isku dhafan, sida magacooda ka muuqata, waa bangiyo leh raasamaal gaar ah, isla markaana, leh hanti guud. Noocyada bangiyada ayaa sidoo kale si aad ah loo yaqaan oo kuwa dadku si caadi ah u isticmaalaan. Dowlada Spain. Waxay siisaa irbado raasumaal ah bangiyadan iyada oo loo sii marayo FROB.
Noocyada kala duwan ee bangigu waxay kuxirantahay waxqabadkooda
Kala soocida ugu xiisaha badan, waxaa sidoo kale jira waxqabadka ama aragtida bangiga la sheegay. Inkasta oo jaleecada hore, ay umuuqato in bangiyada oo dhami ay isku mid yihiin, waa hadafka kuu sheegi doona ujeedooyinka bangiga la sheegay inay yihiin oo ku saleysan taas, waa maxay faylalka macaamiishiisu. Liiskan gudahiisa waxaan ka heli karnaa:
Bangiga soo saara ama bangiga dhexe, maxay yihiin sideese u shaqeeyaan?
Bangiga noocan ah waxaa lagu magacaabaa "bangiga bangiyada." Halkan laga bilaabo, waxa la isku dayay waa kormeerka iyo toosinta dhammaan nidaamka maaliyadeed ee dalka. Bangiga noocan ah ayaa mas'uul ka ah dejinta siyaasadaha ku saleysan lacagaha, soo saarista lacagaha waddanka, marka lagu daro in lagu hayo dhammaan kaydadka dalka xaalad qumman. Gudaha Isbaanishka, cidda mas'uulka ka ah tan waa Bangiga Isbaanishka, oo ah hay'adda mas'uulka ka ah masawirka maaliyadeed ee Isbaanishka oo dhan; si kastaba ha noqotee, cidda run ahaantii gacanta ku haysa gabi ahaanba waa Bangiga Dhexe ee Yurub.
Maxay yihiin bangiyada ganacsiga sideese u shaqeeyaan?
Bangiyada ganacsiga waa kuwa diirada saaraya u adeegida macaamilka. Bangiyadan ayaa ah kuwa u xilsaaran bixinta amaahda, dhigista dhigaalka, iwm. Bangiyada noocan ahi maahan bangiyada maalgashiga.
Kala saarida bangiyada heerkaan, waxay dhacday 1929 amarro Mareykan ah markii la rabay in laga fogaado burburka dhaqaalaha. In kasta oo Yurub aysan ka jirin sharci kala sooca maaliyadda, bangiyado badan ayaa u fuliya si loo badbaadiyo.
Bangiyada maalgashiga, maxay yihiin iyo sidee u shaqeeyaan?
Bangiyada maalgashiga dhexdooda, waxaan ka helnaa dhammaan badeecooyinka la xiriira mustaqbalka. Bangiyadan ayaa diiradda saaraya shirkadaha iyo shakhsiyaadka labadaba bangiyadan gudahood waxaad ka heli kartaa xulashooyin sida helitaanka shirkado ama midow laba. Halkan, waxaad sidoo kale ka heli kartaa iibinta dammaanadaha suuqa oo aad ka heli kartaa talo wanaagsan si aad u hesho hawlgallo wanaagsan mustaqbalka.
Waa maxay bangiyada shirkaduhu sideese u shaqeeyaan?
Bangiyada shirkadaha dhexdooda, waxaa jira macaamiil u badan shirkado. Halkan waxaa ku yaal alaabooyin gaar ah oo ka caawiya shirkadaha inay horumariyaan waxqabadkooda. Noocyada noocaan ah waa kuwa laxiriira khadadka amaahda, qiimo dhimista qoraallada xayeysiinta, lacagaha iyo dakhliga ka soo baxa jeegagga ama rasiidhada si looga qaado adeegyada.
Bangiyada macaamiisha, maxay yihiin iyo sidee u shaqeeyaan?
Bangiyada macaamiisha dhexdooda, waxaa jira shaqsiyaad. Bangiyada noocan ahi waa kuwa aan booqano maalin kasta oo aan ka heli karno amaah shaqsiyadeed, amaahda guryaha lagu iibsado guriga aan ku riyoonno, codsanno kaararka amaahda, soo bandhigidda dammaanadaha amaahda amaahda, iwm.
Bangiyada keydka, maxay yihiin sideese u shaqeeyaan?
Kuwani hay'adaha bangiga keydka ee Isbaanishku waa hay'ado aan faa'iido doon ahayn. In kasta oo aysan jirin wax raad ah oo ku saabsan bangiyada kaydka ka dib dhibaatadii sanadihii la soo dhaafay (maxaa yeelay qaar badan ayaa loo beddelay bangiyada), noocyada noocan ah ayaa jiray si loogu bixiyo shaqooyinka bulshada shakhsiyaadka iyo shirkadaha labadaba si loo siiyo suurtagalnimada inay leeyihiin bangiyada keydka.
Waa maxay bangiyada amaahda guryaha iyo sidee u shaqeeyaan?
Bangiyada noocan ah ayaa aad caan u ah markay tahay bixinta amaahda si loo iibsado guri. Bangigan waxaa goobjoog ka ah shaqsiyaad iyo shirkado.
Gudaha Isbaanishka, kama heli kartid bangiga noocan oo kale ah, maadaama ay caan ku yihiin Mareykanka laakiin aysan weli faafin, si kastaba ha noqotee, waxaa horeyba uga jiray Spain shirkado qaar oo aad u tagi karto ujeedadan.
Noocyada bangiyada khasnadda waxaa lagu yaqaan shirkadaha dhexdooda mana ahan wax aad u badan heerka qof-ilaa-qof. Bangiyadan ayaa mas'uul ka ah inay shirkadaha siiyaan irbado waaweyn, si looga caawiyo inay mar kale soo baxaan. Noocan noocan ahi ma laha xafiisyo u furan dadweynaha.
Hay'adaha amaahda rasmiga ah, maxay yihiin iyo sidee u shaqeeyaan?
ka Hay'adaha amaahda rasmiga ah ayaa ah kuwa mas'uul ka ah ka shaqeynta gudaha Isbaanishka iyada oo loo marayo machadka amaahda rasmiga ah. Noocyada noocan ah waxay leeyihiin shaqo ku kooban ganacsi oo xiriir toos ah la leh Wasaaradda Dhaqaalaha. Ujeeddooyinka ugu waaweyn ee noocan ah hay'adda waxaa ka mid ah ujeeddada koritaanka iyo siinta awood u leh inay gebi ahaanba hagaajiso hantida laga helay heer qaran, iyo sidoo kale qaybinta saxda ah. Tan darteed, waxay dooneysaa inay kordhiso dhammaan noocyada waxqabadyada dhaqaale iyo kuwa dhaqameed, ma ahan oo keliya si loo kordhiyo shaqada, laakiin sidoo kale inay kordhiso dalxiiska goobtaas.
ICO waa tan mas'uul ka ah taageerida mashruucan noocan ah si loogu shubo raasamaal shirkado ku wareegsan Spain. Waxay tan u sameeyaan si shirkadahaani ay ugu dhex tartamaan dhexdooda ugana qayb qaataan horumarka dalka guud ahaan.
Intaa waxaa dheer, barnaamijkani wuxuu caawiyaa kuna dhiirrigeliyaa shirkadaha inay iskaashi ka dhex sameeyaan barnaamijyada siyaasadeed ee dhaqaalaha marka dhibaatooyinka ka dhashaan masiibooyinka dabiiciga ama xaaladaha dhibaatooyinka dhaqaale.
Sidaad u arki karto qoraalkan oo dhan, ma sahlana sida loola macaamilo bangi sidii aan u maleynay, maxaa yeelay waa inaan ogaano waxa bangigaasi noo fidinayo si aan u weydiino dhab ahaan waxa aan dooneyno iyo wixii ka sarreeya, si aan shakhsi ahaan uga soo qeybgalno waxa waxaan rabnaa inaan helno.
Mid kasta oo ka mid ah bangiyada waxay dejiyeen heerar ku saabsan wax soo saarka inaad bixin karto, si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood iyo si aad uga guuleysato macaamiisha qaarkood, waxay bixiyaan alaabooyin aysan u qalmin 100%. In kasta oo Bankiga Isbaanishku isku dayo inuu waxyaalahan oo dhan gacanta ku hayo, haddana muhiimada ay leedahay in sidoo kale nalagu wargaliyo waxa nooc kasta oo bangi ah uu na siin karo iyo ujeedka laga leeyahay, ayaa ka dhigaya dhammaan ganacsiyadayada iyo codsiyada ku dhex jira, kuwo aad u ammaan badan.
Xitaa sidaas oo ay tahay, ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah inaan u tagno bangigeenna aan ku kalsoon nahay oo aan u sheegno waxa aan dooneyno inaan ku guuleysano, sida caadiga ah, isla bangiga dhexdiisa wuxuu ku leeyahay laamo kala duwan oo bangiyada mid walba waxaa ka jira xirfadle ka socda mid kasta si aan u isaga u tag ka hor nooc kasta oo shaki ah.
Meeqo lacag ayaa jirta adduunka
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Banca » Noocyada Bangiyada iyo shaqooyinkooda kala duwan
Ku shubashada waxsoosaarka wax ka badan 1%
Dhibcaha lagu sameeyo sayid